ဗေဒင်သတင်း – ဗေဒင်သုတ
January 16, 2022 January 17, 2022 Ak	View : 658
လက်ရှိဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဇန်နဝါရီနဲ့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းအထိ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ သောကြာ ဂြိုဟ် (၂) လုံးရဲ့ အသွားမမှန် ဖောက်ပြန်မှုက လူသားတွေအပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေမလဲ ဆိုတာကို ဗေဒင်သုတ အဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗီးနပ်စ် (ခေါ်) သောကြာဂြိုဟ် Morning Star (သို့) Evening Star အဖြစ် မြင်ရလေ့ ရှိတဲ့ ဗီးနပ်စ် (ခေါ်) သောကြာဂြိုဟ်ဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာဓန ၊ နှလုံးသားဆန္ဒနဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သောကြာဂြိုဟ်ဟာ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်ကနေ ၂၉ ရက်နေ့အထိ နောက်ပြန်သွားလာနေမှာမို့ ဒီအတောအတွင်းမှာ ဘာတွေကို ဆောင်ရ ၊ ရှောင်ရမလဲဆိုတာ အများ နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြပေးပါမယ်။ သောကြာဂြိုဟ် အသွားမမှန်ချိန်ရက်ပိုင်းမှာ မဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ […]
December 3, 2021 December 3, 2021 Ak	View : 2543
နက္ခတ်ဗေဒင်ကျမ်းတွေအရ ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာမယ်၊ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ များလာမယ်လို့ အဟော ရှိပါတယ်။
May 26, 2021 June 29, 2021 Ak	View : 2958
စနေဂြိုဟ်သွား ဖောက်ပြန်ချိန်မှာ စနေဂြိုဟ်က ပေးတဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို အများဆုံး ခံစားရမယ့် ရာသီခွင် (၄) ခု ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ….
ဂြိုဟ်ပူးဂြိုဟ်ယှဉ်နဲ့ (၁၂) ရာသီခွင်ဟောကိန်း
January 14, 2021 January 14, 2021 Ak	View : 1798
ထူးခြားတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်ကနေ (၁၂) ရာသီခွင်ဖွားတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာကို အဖြေရှာ ဟောကိန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဟောကိန်းတွေဟာ အနည်းဆုံး လပိုင်းကနေ နှစ်ပိုင်းအထိ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သတိပြု မှတ်သားထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အိန္ဒိယဗေဒင်ဆရာလေးရဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာ ဟောကိန်းအသစ်
December 22, 2020 December 22, 2020 Ak	View : 3773
ဒီဗေဒင်ဆရာလေးရဲ့ ဟောပြောချက်ကို လုံးဝ ပစ်ယုံဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် လေ့လာ သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက် ဗေဒင်သုတ စာဖတ်သူများကို ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဟောကိန်းကို ဆက်ကြည့်ရအောင်.
နက္ခတ်, ဗေဒင်စာစု, ဗေဒင်သတင်း
ဂျူပီတာနဲ့ စေတန်တို့ရဲ့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဂြိုဟ်စစ်ထိုးပွဲ
December 16, 2020 December 16, 2020 Ak	View : 1901
ကမ္ဘာကနေ အမြင်အရ ဒီဂြိုဟ်နှစ်လုံးဟာ နှစ် ၂၀ ကို တစ်ကြိမ် ပူးကပ်လေ့ ရှိပေမယ့် လာမယ့် ၂၁ ရက်နေ့ ပူးယှဉ်မှုလို အနီးကပ်ဆုံး ဖြစ်တာမျိုးကတော့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာမှာ အခုလို ဂြိုဟ်ပူးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကို ဂြိုဟ်စစ်ထိုးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နက္ခတ်, အတိတ်နိမိတ်, ဗေဒင်စာစု, ဗေဒင်သတင်း
မလွတ်တမ်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ကြယ်တံခွန်တစ်စင်း
July 12, 2020 July 12, 2020 Ak	View : 1471
ကြယ်တံခွန် ပေါ်လာရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုတဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်ကျမ်းတွေရဲ့ နိမိတ်ကောက် အယူအဆတွေကိုတော့
နက္ခတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ, အခြားသုတ, ဗေဒင်စာစု, ဗေဒင်သတင်း
အိန္ဒိယဗေဒင်ဆရာလေးရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟောကိန်း ဖြေရှင်းချက်
April 14, 2020 June 4, 2020 Ak	View : 30486
သူ့အပြောအရ လက်ရှိ ကမ္ဘာမှာ အရှိန်အဟုန် နဲ့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ဟာ လာမယ့် မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ နိဂုံးချုပ်မယ် လို့ ဟောပြောခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ …
April 1, 2020 April 1, 2020 Ak	View : 25727
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်တော့လောက် အဆုံးသတ်သွားမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာဗေဒင်ပညာရှင်တွေရဲ့ ဟောပြောချက်တွေနဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်သုတက မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ပညာရှင် ဆရာစိုးမိုးထွန်းရဲ့ အယူအဆတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။